Fitaovana maoderina maoderina indrindra ho an'ny mpandrindra - Sehatra fohy avy amin'ny Semalt
Fepetra sarotra izany ary mitaky fotoana sy ezaka be. Na dia izany aza, ireo fitaovana fitadiavam-baventy samihafa dia afaka manatsotra sy manamboatra ny fizotry ny fikolokoloana manontolo, ka mahatonga ny data mora ho an'ny fidirana sy ny fandaminana. Andeha hojerentsika ny lisitr'ireo fitaovana maoderina matanjaka indrindra sy ilaina ampiasaina hatramin'izao. Ny fitaovana rehetra voatanisa etsy ambany dia tena mahasoa ho an'ireo mpamorona sy mpandrindra.
1. Fitaovana fanarabiana:
Ny fandinganana horonantsary dia miorina amin'ny rahona ary ny fitaovana fitiliana amin'ny tranonkala. Manampy amin'ny mpizara an-jatony an'arivony izy ireo haka ireo fampahalalana sarobidy tsy misy olana. Ity programa ity dia mampiasa Crawlera, izay mpandrindra fikandrana mahatalanjona sy mahagaga. Izy io dia manohana ny fitifirana mason-tsivana maneso ary manenjika ireo tranokala voarakitra ao anatin'ny segondra. Ankoatr'izany dia ahafahanao manova ny tranokalanao amin'ny adiresy IP samy hafa sy ny toerana samihafa tsy mila mpitantana ny proxy, amin'ny fomba fisaorana, ity fitaovana ity dia manana safidy HTTP API manontolo mba hahazoana ny zavatra vita avy hatrany.
Ampiasaina amin'ny web crawler ny tranokala, Dexi.io ahafahanao manaparitaka toerana sy tsotra. Manome safidy telo lehibe izy io: Extractor, Crawler and Tipes. Dexi.io dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra sy mahatalanjona amin'ny tranonkala web na fandrindrana tranonkala ho an'ny mpandraharaha..Azonao atao ny manavotra ny angon-drakitra ho an'ny solosaina / harenanao manokana na azonao ampiasaina amin'ny servisy Dexi.io mandritra ny roa na telo herinandro alohan'ny handraisana azy.
Webhose.io dia ahafahan'ireo mpamorona sy webmasters hahazoana ny angon-drakitra amin'ny fotoana rehetra ary manasokajy saika karazana votoaty, anisan'izany ny horonan-tsary, sary , ary lahatsoratra. Azonao atao ny mamoaka ny rakitra ary mampiasa ny loharano maro karazana toy ny JSON, RSS, ary XML mba hahazoana ny rakitra voavonjy tsy misy olana. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia manampy ny fahazoana ny antontan-kevitra ara-tantara avy amin'ny fizarana Archive, izay midika fa tsy hamoy na inona na inona ianao mandritra ny volana vitsy manaraka. Manohana mihoatra ny valopolo izy io.
Ireo mpamorona dia afaka mamorona daty manokana na mandefa data avy amin'ny pejy manokana ao amin'ny CSV amin'ny Use Import.io. Izy io no iray amin'ireo fitaovana fitadiavana tranonkala tsara indrindra sy mahasoa indrindra. Afaka mamoaka pejy 100 ao anatin'ny segondra izy ary fantatra amin'ny API matevina sy matanjaka, izay afaka mifehy ny Import.io amin'ny programa ary manome fahafahana anao hiditra amin'ny angona azo antoka. Ho an'ny mpampiasa misimisy kokoa, ity programa ity dia manome fampiharana maimaim-poana ho an'ny Mac OS X, Linux ary Windows ary mamela ny angon-drakitra amin'ny rakitra sy ny sary.
Raha mpikirakira matihanina ianao ary miezaka mikarokaroka fandaharana matihanina amin'ny tranonkala mahery dia tsy maintsy manandrana 80legs. Izany dia fitaovana mahasoa izay mamoaka angon-drakitra goavana ary manome antsika fitaovana maimaim-poana amin'ny tranonkala avo lenta. Ankoatra izany, 80legs dia miasa haingana ary afaka mamakafaka sehatra na bilaogy maro samihafa. Izany dia hamela anao haka ny angon-drakitra manontolo na ampahany amin'ny vaovao sy tranonkala media sosialy, RSS sy Atom ary ny bilaogy mivantana. Azonao atao koa ny mamonjy ny angon-drakitra voalamina tsara sy tsara ho fantatra ao amin'ny rakitra JSON na Google Docs Source .